तपाईको राशिअनुसार कति मुखे रुद्राक्ष तपाईका लागि बढी लाभदायक हुन्छ ? कही तपाईको भाग्यले त मोड लिएन ? – Medianp
तपाईको राशिअनुसार कति मुखे रुद्राक्ष तपाईका लागि बढी लाभदायक हुन्छ ? कही तपाईको भाग्यले त मोड लिएन ?
Media NPप्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक १९, २०७५१३:१५0
काठमाडौ । तिहारको पहिलो दिन आज काग तिहार हो । आज देखि तिहारको रमझम घरभित्र छिरेको छ । यस समयमा विभिन्न धार्मिक मान्यताहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि विशेष गरी राशी अनुसार पनि आफ्नो भाग्यको परिक्षण गरिने गरिन्छ ।
तर हामी यस्तो विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौ । ती विषय साच्चै नै रोचक रहेको छ । त्यो विषय हो रुद्राक्ष कुन राशीको लागी बढी फलदायी हो त ? तर धार्मिक आस्थाका रूपमा रहेको रूद्राक्षले अलौकिक शक्ति प्रदान गर्ने विश्वास गरिनुका साथै रूद्राक्षलाई आयुर्वे्दिक औषधीमा समेत निकै उपयोगी हुने गर्छ ।
त्यसैले राशी अनुसार रूद्राक्ष प्रयोग गर्नाले धनको लाभ, परिवारमा सुख शान्ति, व्यापारमा बृद्धी हुने समेत विश्वास गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा रुद्राक्षको मुख अनुसार पनि आफ्नो कुराहरु भर पर्दछ । यो अवस्थामा कुन राशी हुनेहरुको लागी कति मुखे रुद्राक्ष बढी फाइदाजनक हुन्छ । हेरौ तल,
सुरुवातमा मेष राशी रहेको छ । यो राशी हुने हरुको लागी तीन मुखी राम्रो मानिएको छ ।त्य सैगरी दोस्रोमा छ ,वृष राशी , यो राशी हुनेहरुको लागी ६ मुखी राम्रो मानिएको छ ।
त्यसैगरी तेस्रोमा मिथुन राशी रहेको छ । यो राशीका लागी चार मुखी राम्रो हुनेछ । त्यसैगरी चौथोमा कर्कट राशी रहेको छ । यसका लागी २ मुखी राम्रो रहेको छ ।पाचौमा रहेको छ ,सिंह राशी, यो राशीको लागी १ मुखी राम्रो रहेको छ ।
त्यसैगरी छैटौमा कन्या राशी रहेको छ । यसका लागी ४ मुखी राम्रो मानिन्छ । त्यस्तै सातौमा तुला राशी रहेको छ । यसका लागी ६ मुखी राम्रो मानिन्छ ।रत्यसैगरी आठौमा वृश्चिक राशी रहेको छ । यो राशीको लागी तीन मुखी राम्रो रहेको छ ।
त्यसैगरी नौऔमा छ ,धनु राशी, यसका लागी पाँच मुखी राम्रो मानिएको छ । त्यस्तै दशौमा मकर राशीका लागी सात मुखी निकै राम्रो रहेको छ । एघारौमा रहेको छ ,कुंभ राशीका लागी सात मुखी राम्रो रहेको छ । र अन्त्यमा मीन राशी हुनेहरुका लागी पाँच मुखी राम्रो रहेको छ ।
प्रियंकाको घरमा नै सुन्दरताको तुलना, प्रियंका भन्दा कयौँ गुण सुन्दर छिन् प्रियंकाकी जेठानी, हेर्नुहोस् होस उडाउने हट तस्वीरहरु
के तपाई यो तिहारमा आफन्तलाई के बनाएर खुवाउने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए स्वादिलो एग मसला रेसिपी यसरी बनाएर खुवाउनुहोस्
बैशाख १ गतेदेखि २४ गतेसम्म मंगल ग्रहले राशी परिवर्तन गर्ने ! हेर्नुहोस् कुन राशीलाई कस्तो असर पर्छ !
यी सपना देखेको १० दिनमा नै पुरा हुन्छ ! हेर्नुहोस् के भन्छ शास्त्रले ?
निर्वस्त्र भएर कहिल्यै नगुर्नहोस् यी काम ! जसले जीवनभरि नकारात्मक असर पर्छ !
घरको मुलद्धारमा राख्नुहोस् यी चिज ! जसले गर्दा आउनेछ घरमा खुसीयाली !
हेर्नुहोस् ! यी तीन राशी भएका पुरुषको प्रेममा महिलाहरु पागल हुन्छन् !
ज्योतिष शास्त्रीका अनुसार कुन राशि भएका व्यक्तिले के काम गर्ने, के नगर्ने ? (जान्नुस् )